အောကားများ: ကာမပွဲတော်အုပ်ကြီး အပီတီး
ရှယ်အောကာ အသစ်လေး တစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
တကယ့်ကို ပွဲတော်အုပ်ကြီး စားသောက်ရသလိုပါဘဲ။ ၁၇ - ၁၈နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ရွယ်သူ စော်တစ်ပွေ ပြီးတော့ ၃၅လောက်ရှိမဲ့ တင်ကြီးကြီး ရင်ကြီးကြီး မိန်းမတစ်ယောက်တို့ ပါဝင်တဲ့ ၃ပွင့်ဆိုင် လိုးပွဲကြီးဗျာ ကောင်လေးကတော့ တကယ်ကို ကံကောင်းတာဘဲဗျ တွင်းသစ်
တွင်းဟောင်း နှစ်တွင်းလုံး တပြိုင်တည်း အောင်ရတယ်ဗျ။ စော်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ တကယ့်ဝါရင့်
သဘာရင့် တင်ကြီးကြီး ရင်ကြီးကြီး မိန်းမ ဘယ်မိန်းမက လိုးကောင်းတယ်ထင်လဲ စော်ငယ်ငယ်လေးကလဲ တော်တော်ကြီးကို ဏှာထန်နေတာဗျာ။ အသက်ကြီးကြီး မိန်းမကလဲ နည်းတဲ့ဖင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ ရှယ်ကြီး တသက်လုံး လိုးဖြိုလို့ မကုန်တဲ့ အိုကြီးမျိုးပေါ့ တဏှာရမ္မက် အရမ်းကြီးလွန်တဲ့ အသက်ကြီးကြီး မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ အသက်ငယ်ငယ် မိန်းမတစ်ယောက်တို့ကို စိတ်ကြေနပ်အောင် လိုးဖြိုပေးဖို့ဆိုတာ လွယ်တယ်များမှတ်လား တို့မင်းသားလေးကတော့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်တဲ့ လီးကြီးကြီးနဲ့ စော်နှစ်ပွေလုံးကို ဝက်ဝက်ကွဲ လိုးပေးတာဗျာ။ ၃၆မိနစ်တောင် ကြာတယ်။ သတိတော့ ပေးလိုက်မယ်နော် တော်တော်ကြီးကို ရမ္မက်ကြွစေတဲ့ ကားလေးဖြစ်တာမို့ တခါတည်း စိတ်ဖြေလို့ရမဲ့ အချိန်မှ ကြည့်ပါ။ မနာလိုတော့ မဖြစ်နဲ့နော် ကောင်လေးငယ်ငယ်လေးရဲ့ ကံကောင်းပုံလေးတွေကို အကြည်လင်ဆုံး HD ရိုက်ချက်နဲ့ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ တကယ်ကို ကြည့်ကောင်းကြောင်း လက်ခံသွားရမဲ့ ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်
Admin အနေနဲ့ အပြာကား/စာအုပ် လာကြည့်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အဆင်ပြေအောင် အပြာကားများကို ရှာဖွေပြီး ဖျက်တန်ဖျက် တိုးတန်တိုး ဖိုင်ဆိုဒ်များအား မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေပါ အဆင်ပြေအောင် လျော့တန်လျော့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ဖို့ Upload လုပ်တာတမျိုး ဒေါင်းဖို့အတွက် Upload လုပ်တာတမျိုးနဲ့ မနည်း လုပ်ပေးထားရပါတယ် ဒီကြားထဲ Blog မပိတ်ခံထိရေးအတွက် ဒိုမိန်းဝယ်ယူ သုံးစွဲထားရပါတယ် ပရိတ်သတ်များ အနေနဲ့ Admin အား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအနေနဲ့ Blog ဘေးတွေအောက်တွေမှာ ထည့်ထားသော
ကြော်ငြာပုံများအား လာကြည့်တိုင်းတစ်ချက်စီနှိပ်ပေးဖို့ တောင်ဆိုချင်ပါတယ်အပြန်အလှန်ပေါ့ဗျာ...
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနည်းမသိပါက ဒီမှာ အရင်သွားကြည့်ပေးပါ။
>>> Donwload Or View From Openload! <<<
Download Small File Size!
>>> Download Or View From pCloud! <<<
Labels: ကြည့်သင့်တဲအပြာကားများ, အပြာကားတို, အပြာကားရှည်, အမေရိကန်, ဥရောပ
အဖုတ်လျပ် အလိုးကောင်းတဲ့ ဂျပန်ဘဲကြီး
စော်တစ်ယောက်ကို သုံးယောက်ဝိုင်းပြုစုမယ် HD
အဖုတ်ပြူးတဲ့ စော်ချောချောလေးကို လိုးတဲ့ကား
အဖုတ်အရမ်းလှတဲ့စော်လေးကို နှစ်ချီလိုးတဲ့ HD
အကိတ်ကြီးနဲ့ အကိတ်လေး ရှယ်လိုးတဲ့ကား
ရမ္မက်ထန်တဲ့ မော်ဒယ်မလေး HD
မြန်မာဝတ်စုံ ဝမ်းဆက်နဲ့စော်လေးကို လိုးမယ်
ရမ္မက်ကြီးတဲ့ အလန်းနှစ်ပွေ ရှယ်လိုးပွဲ
East Kinky Style (ဂျပန် ၁၈+++)
ကာမအနှိပ်ခန်း လိုးကား HD
၉ လပိုင်းထွက် ဂျပန်အကောင်းဆုံး လိုးကား HD
အပြုအစုတော်တော်ကောင်းတဲ့ မမ (မြန်မာအောကား)
ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကျောင်းသူလေးကို လိုးတဲ့ကား
စော်ကိုမှောက်ခိုင်းပြီး လိုးမယ် (မြန်မာအောကား)
စောင်းစောင်းလေးအိပ်နေတဲ့စော် နောက်ကနေလိုးမယ် (မြန်...
Eye Contact (ထိုင်း ၁၈++ ဇာတ်လမ်းရှည်)
အပြာမင်းသမီးအသစ် Ai Suzuki ရဲ့လိုးကား
စော်၁ပွေဘဲ၄ပွေ ထောင်ထဲက လိုးကားကြမ်း HD
ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ မြန်မာစစ်စစ်လိုးကား (ရှယ် 39 မိနစ်)
CCTV မှတ်တမ်း video (သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဓါးထိုးမှ...
15-16 နှစ်အရွယ်စော်လေးကို လိုးတဲ့ကား
အလုံပိတ်တဲထဲမှာ တော်သလင်းဇာတ်ခင်းနေတဲ့ အတွဲနှစ်တွဲ
အတူတူပြီးကြတာပေါ့ လိုးကား HD
သမီးအရွယ်လေးကို လိုးကား HD
ကိုယ်လုံးအရမ်းလှတဲ့ စော်ကို လိုးတဲ့ကား
Good Looking Nurse(ကိုရီးယား18+++)
ညိုချောလေးနဲ့ ဘဲနှစ်ပွေ လိုးကားကြမ်း
အရမ်းမိုက်တဲ့ လိင်ပညာပေး လိုးကွက်များ HD
အပြာကား၊ အပြာစာအုပ်များ ဒေါင်းယူကြည့်ရူ့နည်း
လိုးတာတောင် ပန်းပန်မပျက်တဲ့ ဂျပန်မလေး HD
လီးစုပ်လဲကောင်း အပေးလဲထန်တဲ့ မချော HD
ဂျပန်ဖူးကားလေးတွေ ကြည့်ချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကားသစ်တစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ၁၆နှစ်အရွယ် စော်လေးကို အဖေအရွယ် ဘဲကြီးက ညာတာပါတေး လိုးသမတာဗျ...
ဂျပန် HD ကားသစ်တွေထဲကမှ ရှယ်ကားလေးတစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ စော်လေးက ရုပ်လေးချောသလောက် အပျိုဖြစ်ခါစမှာ တဏှာကြီးပြီး အဖုတ်ဘယ်လောက်တောင် ...
အပြုအစုတော်တော်ကောင်းတဲ့မမတစ်ယောက်နဲ့လိုးကားလေးပါ။ မြန်မာကားတွေဆိုတော့အညွှန်းတွောဘာတွေရေးမနေတော့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်သာကြည့်ရူ့ခံစားလိုက်ပါ။ Adm...
Admin အနေနဲ့ အပြာကား/စာအုပ် လာကြည့်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အဆင်ပြေအောင် အပြာကားများကို ရှာဖွေပြီး ဖျက်တန်ဖျက် တိုးတန်တိုး ဖိုင်ဆိုဒ်များအား မြန်မာနိ...
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ခပ်လှလှ ဂျပန်မလေးကို အဖုတ်လျပ် အလိုးကောင်းတဲ့ ဘဲတစ်ပွေနဲ့ ပေးလိုးထားတာဗျာ။ ကိုယ်စော် ကိုယ်ကို စွဲနေစေအောင် ဘယ်လိုမျ...
ကြည့်ရတာ တကယ်ကိုအရသာရှိစေမဲ့ ဂျပန်ကားကောင်းလေး လာပါပြီဗျာ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂျပန်မလေးကို ကာမအထွတ်အထိတ်ရောက်အောင် ဆွပေးပြီး ရှယ်လိုးပြမှာဗ...
ဂျပန် Top ten Pornstar တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yui Hatano ရဲ့ဒီနေ့ထွက်ကားသစ်လေးပါ။ ဘဲကြီးသုံးယောက်ကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးပြုစုပေးတာလေးပါ။ ကြိုက်ကြမယ်လ...
နပ်စ်မလေး၂ယောက်၊ ဆရာဝန်နဲ့ဆေးရုံလာတက်တဲ.လူနာ တို့ရဲ.အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က နပ်စ်မလေးကို ခွဲစိတ်ဖို့သင်ကြားပေးမယ်ဆိုပီး ခွဲစိတ...
အခန်းလေးထဲမှာ မြန်မာအတွဲလိုးကြတဲ့ကားလေးပါ။ ကောင်မလေးကအရမ်းလှတယ်ဗျ။ သူ့ဘဲတစ်ချက်တစ်ချက်ဆောင့်ပေးလိုက်ရင် မျက်းစင်းလေးမှေးကျသွားပြီး ပါးစပ်လေး...
ဒီတခါတော့ကောင်မလေးငယ်ငယ် ကျောင်းသူအရွယ်ကြည့်ချင်သူများအတွက်ပါ။ ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ ဘဲကြီးက စော်လေးကို အွန်လိုင်းကနေ Chatting လုပ်ပြီးလှမ်းခေါ...
How to Download Videos/Books